रोचक Archives - sandeshpost
Home > Archive by Category रोचक
सपनामा देखिएको भैरवको मूर्ति विपनामै यसरी भेटियो सपनालाई विपनामा परिणत गर्ने भाषण धेरै हुन्छ, तर सपनामा देखिएको विषय विपनामा परिणत नहुन पनि सक्छ । भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर २ दुवाकोटमा सपनामा देखिएको तथ्य विपनामा परिणत भएको छ ।फैटोका गणेश मन्दिरका पुजारी शंकर श्रेष्ठ मन्दिरमै सुतेका थिए । ‘विहान पौने १ बजे सपना देखे । […]
December 12, 2018 admin13
काठमाडौं- १२ वर्षकी थिइन्, रुबिना राउत। जब उनलाई पहिलो पटक महिनावारी भयो, घरसँगको ‘सम्बन्ध विच्छेद’ भयो। अभिभावकले एक हप्ताका लागि आन्टीको घरमा पठाइदिए। ‘त्यो एक हप्ता म कैदीसरह बन्नुपर्यो,’ उनी सम्झन्छिन्, ‘त्यो समय मेरा लागि अन्धकारपूर्ण थियो, जुन म बिर्सन सक्दिनँ।’ उनका लागि भाँडाकुँडा पनि छुट्टै थियो। बोटबिरुवा छुन नहुने, कुनै केटाको मुख हेर्न नहुने […]
यस्ता नेपाली जो ३ वटा विषयमा गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड राख्न सफल भएका छन्
December 12, 2018 admin15
गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड राख्नु चानचुने कुरा पक्कै होइन। अझ ३ वटा विषयमा रेकर्ड राख्नु भनेको सपना जस्तै हो। त्यही सपनालाई बिपनामा परिणत गरिदिएका छन् कराते खेलाडी उज्वल ठकुरीले। कडा मिहिनेत, उच्च मनोबल र उत्तिकै जोखिम मोलेर मात्रै ३ वटा गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड सम्भव भएको हो । काठमाडौँमा जन्मिएका ठकुरी हाल अमेरिकाको डिसी महानगर क्षेत्रमा बसोबास […]
३५ हजार फीटको उचाइमा उडिरहेको जहाजमा जन्मियो बच्चा, भाग्यमानी बच्चाले आजिवन पाउने भयो निशुल्क जहाजमा उड्न
उडिरहेको विमानमा बच्चा जन्मिएपछि केही बेर विमानभित्र असहज परिस्थिीतिको सामना गर्नु परेको छ । साउदी अरबको दम्मासबाट भातको कोच्चि आती फ्लाइटमा ३५ हजार फीटको उचाइमा महिलाले बच्चा जन्माएपछि विमानलाई आकस्मिक अवतरण गर्नु चालकदलका सदस्यहरु बाध्य बने । महिलाको डेलिवरी भइरहेको समयमा विमानलाई मुम्बई विमानस्थलमा आपतकालिन अवतरण गरिएको थियो । जेट एयरवेजले यस बच्चालाई जीवनभर विमान […]
सपनामा सम्भोग, यौन सम्पर्क गरेको देखेमा लाग्छ यस्तो अर्थ
December 12, 2018 December 12, 2018 admin47
मानिसहरुले समपना आफुले सोच्न अथवा बुझ्न सक्ने उमेर भए पछि देख्ने गरेका हुनछन् । सपनाहरु बिभिन्न कारणले देख्ने गर्दछन् । भने उमेर पुग्दै गए पछि मानिसहरुको सपनामा सम्भोग गरेको समेत आउने गर्दछ । अधिकांश युवायुवतिहरुमा चाहाना अनुसार यस्तो सपना देख्न स्वभावीक रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । अध्यनमा अधिकांश युवायुवतिहरु यस्तो सपना देख्न चाहन्छन् जहाँ […]
एजेन्सी । महिलाका लागि अस्थायी गर्भनिरोधका अनेक विधि छन् । सुर्इ देखि लिएर, पिल्स अनि पाठेघर तथा पाखुरामा राख्नेसम्मका उपकरण र कण्डम पनि । तर पुरुषका लागि भने अस्थायी गर्भर्निरोधक साधनको रुपमा कण्डमको विकल्प अहिलेसम्म छैन । यस्तोमा पुरुषहरु आफुहरुको लागि पनि कण्डमको विकल्पका रुपमा नयाँ गर्भनिरोधक साधनको व्यग्र प्रतिक्षामा हुनु स्वभाविकै हो । पुरुषहरुको […]
अब महिलाले पनि उभिएरै पिसाब फेर्न मिल्ने
December 12, 2018 admin36
महिला र पुरुषहरुमा पिसाव पेर्न जाँदा महिलालाई अलिक समस्या हुने गरेको देखिन्छ । महिलाहरुको यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दे हालै नोभेम्बरमा विश्वभर मनाईएको वल्र्ड ट्वाईलेट डे को अवसरमा कसैले पनि सोच्नै नसक्ने उपकरण सार्वजनिक गरिएको छ। यो उपकरण महिलाहरुलाई शौचालयमा सुविधा दिनको लागि बनाइएको हो । जुन उपकरणको मद्धतले महिलाहरुले पनि उभिएरै पिसाव फेर्न मिल्नेछ । […]
अचम्मको मन्दिर: पाथीभरा मन्दिरमा जे माग्यो त्यही पुरा हुने (भिडियो सहित)…
December 11, 2018 admin52
ताप्लेजुङको पाथीभरा देवी नेपालकै चर्चित धार्मिक पर्यटकीयस्थलकाे रूपमा मानिन्छ । पूर्वाञ्चलमा भने पर्यटकहरूकाेलागि पहिलाे गन्तब्य बनिने गरेकाे छ । चारैतिर हराभरा र उकाली अाेराली बिच पहाड तथा हिमाली भेगकाे फेदमा लेक लाग्ने ठाउमा पर्दछ पाथिभरा देवि मन्दिर । याे मन्दिर यात्रा गर्न जाे काेहिका लागि त्यती सहज छैन । यात्रा कठिन भएकै कारण धेरै मानिसले […]
December 11, 2018 admin72
काठमाडौं । सुन्दा पनि नमजाको समाचार । पति विदेशी जेलमा तर घरमा पत्नी गर्भवती। बच्चा जन्मेको खबर पतिले जेलमै सुन्छन् र खुशी हुन्छन् । यो खबर प्यालेस्टिनको हो। हजारौं प्यालेस्टिनीहरु इजरायली जेलमा छन् । तर उनीहरुका श्रीमती घरमा बच्चा जन्माइरहेका हुन्छन्। झट्ट हेर्दा अवैध कार्यबाट बच्चा जन्मेको हुनसक्ने भएपनि यो भने त्यस्तो होइन। अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुका […]
एक मासु पसल भयो एकाएक प्रख्यात ! यी सुन्दरीको सुन्दरता हेर्नैको लागि लाग्ने गर्छ भिड ! हेर्नुहोस् तस्विरमा !
December 11, 2018 December 11, 2018 admin43
सौन्दर्य भने पछि जो-कोहि पनि मोहित हुने गर्छन्। अझै युवतीको सुन्दरताको पछाडी लाग्ने पुरुषहरुको पनि उत्तिकै संख्या रहने गर्छ। एक सुन्दर युवती कसलाई पो मंपर्दैना र? आज हामी एक सुन्दर युवतीको वारेमा तपाईलाई जानकारी दिनेछौं। यी युवती अत्याधिक सुन्दर हुनुको वावजुत पनि मोड्लिंग गर्दिनन्। उनलाई दिनहुँ जस्तो धेरै चलचित्र साथै मोड्लिंगको अफर आउने भएता पनि […]
श्रीमान बिदेश भएकी महिलालाई बलात्कार गर्न खोज्नेलाई जुत्ताको माला र २… (120)
यौन जिज्ञाशा: महिलालाई असाध्यै मनपर्ने यौन आसन कुन कुन हुन् ? (39)
भगवानका पाला देखिनै यौन सम्पर्क गर्ने सयौ तरिका भए पनि महिलाहरूलाई मन… (22)